युट्युबमा समीक्षा, पुलिसको हतकडी !
Friday, September 20, 2019 | शुक्रबार, असोज ३, २०७६
पवन बराइली काठमाडौं, २९ जेठ
‘मेमे नेपाल’ युट्युब च्यानलका सञ्चालक प्रनेश गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । चलचित्र ‘वीर विक्रम–२’ बारे ‘ठट्यौली समीक्षा’ युट्युबमा अपलोड गरेकै कारण गत २४ जेठमा गौतम पक्राउ परे ।
‘ठट्यौली समीक्षा’मा आफ्नो गाली बेइज्जती गरेको भन्दै चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मिलन चाम्सले प्रहरीमा उजुरी दिए । चाम्सले दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले गौतमलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले गौतमविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । मंगलबार अपराध महाशाखाले एक हप्ताका लागि म्याद थप गरी उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा प्रनेश प्रकरण चर्चामा छ । कानुनका जानकारले युट्युब च्यानल सञ्चालकलाई विद्युतीय अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाइनुलाई ‘सरकारी रवैया’का रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विकृति रोक्न प्रहरीले चालेको कदम स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया पनि दिने पनि उत्तिकै छन् ।
प्रनेश पक्राउ पछि नेपाली चलचित्रमा बहस सुरु भएको छ । सँगै, प्रनेशको पक्ष र विपक्षमा बुद्धिजीवी, लेखक, नेता, समीक्षक र पत्रकारसमेत कित्ताकाट भएका छन् ।
के छ ‘ठट्यौली समीक्षा’मा ?
मेमे नेपालमा अपलोडेड भिडियोमा गौतमले चलचित्र ‘वीर विक्रम–२’ माथि ठट्यौली शैलीमा समीक्षा गरेका छन् । समीक्षामा चलचित्रको गुण–दोष केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
यस क्रममा प्रनेशले ‘चलचित्रमा कलाकारको अभिनय खासै दमदार नभएको’ र बलिउड चलचित्र सोलेको ‘कपी’ भनेका छन् ।
उनले चलचित्रका नायक नाजिर हुसेनलाई अशोक दर्जी र नायिक वर्षा सिवाकोटीलाई निकिता चन्दकको पहिरनसँग जोडेर खिल्ली उडाएका छन् । नायक पल शाहलाई मुख बांगो भन्दै एक भारतीय कलाकारसँग दाँजेका छन् ।
अधिवक्ता भन्छन्ः सत्ताको दुरुपयोग
प्रनेश पक्राउ प्रकरणमा जानकारहरु पनि कित्ताकाट भएका छन् । कानुनविद्ले चलचित्रको आलोचना गर्दैमा पक्राउ पर्नुलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन’ भनेका छन् ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले प्रनेशमाथि मुद्दा चलाउनुलाई ‘सत्ताको चरम दुरुपयोग’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
‘प्रनेश गौतमले गरेको समीक्षालाई विद्युतीय ऐन लगाउन मिल्दैन । विद्युतीय तरंगमार्फत आर्थिक कारोबार भएको छैन भने यसलाई विद्युतीय ऐन भन्न मिल्दैन,’ नेपालले भने ।
नेपालका अनुसार फिल्मको समीक्षा गर्दा गाली बेइज्जत गरिए मानहानिको मुद्दा लाग्छ, विद्युतीय कारोबारको मुद्दा लाग्दैन र लगाउनु पनि मिल्दैन ।
के भन्छन् चलचित्र समीक्षक ?
आलोचना सहन नसक्ने मान्छेले चलचित्र प्रदर्शन नै गर्न नहुने बताउँछन्, चलचित्र समीक्षक सचिन घिमिरे । ‘यो त एउटा प्रेमीले पे्रमिकालाई लेखेको प्रेमपत्र आफ्नै सिरानीमुनि राखेर आफैं रुने आफैं हाँस्ने जस्तै भयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘आलोचना सहन नसक्नेले चलचित्र नबनाए हुन्छ ।’
उनका अनुसार प्रनेशले चलचित्रको मनोरञ्जनात्मक कोणबाट समीक्षा गरेका छन् । ‘पछिल्लो समय राज्य अनुदार हँुदै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बर्खिलापमा गएको उदाहरण मात्रै हो, प्रनेश प्रकरण ।’
त्यस्तै, चलचित्र समीक्षक मनोजबाबु पन्तले निर्देशक मिलन चाम्सले रोजेको बाटो गलत भएको बताए । यसले समग्र नेपाली चलचित्र उद्योगको विकासमा बाधा पुर्याउँछ ।
‘बोल्न पाउनु स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिको कुरा हो,’ पन्तले भने, ‘पुलिस प्रशासनले पक्रनु राम्रो होइन ।’
प्रनेश पक्राउ प्रकरणले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ लाई विश्वभर समान्य रुपमा लिइन्छ ।
त्यस्तै, शैलीमा सिनेमाको हस्यौली समीक्षा गरेका प्रनेश गौतमलाई नेपाल प्रहरीद्वारा साइबर अपराधमा पक्राउ गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफ छ । आलोचनात्मक चेत लोकतन्त्रको मूल मर्म हो, यसको संरक्षण गरियोस् ।’
पत्रकार कनकमणि दीक्षितले प्रनेश पक्राउ प्रकरणमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘के, यति मज्जाको ठट्यौली फिल्म रिभ्यु गरेको भरमा मेमे नेपालका प्रनेश गौतमलाई प्रहरीले साइबार अपराधको मुद्दा चलाउन लागेको हो ? त्यसो हो भने यो गलत मात्र होइन, अनर्थको पराकाष्ठा हो र हाम्रो सामाजिक यात्राको दिशाको संकेत पनि !’
चलचित्र निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठले एउटा निर्देशकको उजुरीमा समीक्षकलाई जेल हाल्नु नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘मैले दुई वटा ओटा फिल्म निर्देशन गरेको छु । प्रनेश गौतमलगायत सबै भाइलाई उग्र र अराजक भएर समीक्षा गर्न आग्रह गर्दछु । भविष्यमा मैले निर्देशन वा निर्माण गर्ने कामहरुको ओलोचना गर्न सुविधा छ ।’
त्यस्तै, निर्देशक मनोज पण्डितले पनि प्रनेश पक्राउ प्रकरणप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकका लागि संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । कसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा अरूको मानहानि वा अपमान गर्छ भने त्यसका लागि अरू नै कानुन आकर्षित हुन्छन् ।
समीक्षा गरेकै भरमा भने कुनै कानुन आकर्षित हुँदैन । हरेक नागरिकले आफूसँग उपलब्ध माध्यममार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया जनाउन र अरूको सिर्जनामा टीकाटिप्पणी गर्न सक्छन् ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २९, २०७६, ०३:१९:००
#प्रनेश #मेमे नेपाल
सलमान खानसँगै भित्रिएकी युवती को हुन् ?
आइफामा रणवीरले पत्नी दीपिकाको गाउन सम्हाल्दै गरेकाे तस्वीर बन्याे भाइरल
पवन बराइली @singhbaraili
सरोदवादक सुदर्शनः भारतमा चर्चित, नेपालमा गुमनाम
विप्लवको गीत गाएकी निर्मला भन्छिन्, ‘जीवन गमलाको फूल होइन’
व्यग्र र व्यस्त व्याकुल
जसले वृद्धआश्रमको बास गरायो उसैको लागि ब्रत
नक्कली प्रचण्डको सक्कली संघर्ष
प्रदेश २ः सरकार बिनाको हर्सोल्लास
संविधानको खिलापमा संघीय सरकार
संविधान दिवसका केही अनुत्तरित प्रश्न
संविधानमार्फत संघीय व्यवस्था सुदृढ बन्दैः राष्ट्रपति
सरकारी अस्पतालमा आज ओपीडीतर्फको टिकट निःशुल्क